Corporate Kits, tombo-kase, mari-pankasitrahana sy ny fametahana orinasa
Ny kitapom-bolanao dia tena zava-dehibe amin'ny orinasa misy anao. Mitahiry ny firafitry ny firafitry na ny fanabeazana misy anao, miaraka amin'ireo antontan-taratasy manan-danja toy ny fivoriana fanao isan-taona, fanitsiana, rakitra amin'ny banky, certificates sy IRS. Ny kitapo sy ny firaketana an-tsoratry ny orinasa dia mandamina ny antontan-taratasinao ara-dalàna sy ara-bola.
Ny kitapo misy ny orinasanay dia tonga amin'ny tranga misy loko marevaka tsara ary ny anaran'ny orinasa no mamboraka volamena eo amin'ny hazavana. Anisan'izany ny orinasam-panjakana notendren'ny orinasa, ny anaran'ny orinasa, ny fanjakana ary ny daty fampidirana, ny boky firaketana momba ny Corporate Records, ny lisitry ny mpandika lalàna, ny Minisiteran'ny Corporate, ny Registry Directors and Officers, ny rejisitry ny tomponandraikitra, ny Filankevitry ny Securities, ny mpiara-miasa Fifanarahana ary mari-pankasitrahana marobe manokana.
Mba hamandrihana orinasa orinasa iray, azafady miantsoa ny sampan-draharaham-pifandraisan'ny mpanjifanay Mon-Fri eo amin'ny 7: 00AM sy 5: 00PM Pacific Time amin'ny:
Na azonao atao ny mampiasa ny taratasy fangatahana napetrakay eto: Mametraha fikambanana miaraka amin'ny kitapo orinasa
Ny orinasam-pandraharahana dia misy karazany roa-tonim-piraketana manana taha tsara tarehy, izay nofehezina elektronika nandritra ny taom-panamboarana efa ela, mba hanomezana tolotra maimaim-poana. Ny kalitao avo indrindra amin'ny alàlan'ny famolavolana tora-droa miaraka amin'ny hetsika fanokafana indroa sy famaranana dia ahafahan'ireo pejy handaitra foana ary hiverina mora foana. Ny tsipika tsirairay dia amin'ny antsipirihany amin'ny volamena ary misy amin'ny 5 loko: burgundy, maitso, manga, mainty sy mavo ary endrika 3: Standard Portfolio, Standard Slim sy Standard (Kitapo feno sy tombo-kase)
Ireo orinasam-pitaovana napetraka ireo dia vita amin'ny vinyl tsara tarehy roa tonta. Izy ireo ary mazàna kokoa noho ny kitapom-pahefana. Ny fitaovana avo lenta mitaingina boribory avo telo miaraka amin'ny fanokafana roa ary ny fanakatonana fanakanana dia mamela ireo pejy handaitra ary hamela azy ireo hiverina mora foana. Ny vatom-bokatra tsara rehetra dia aseho amin'ny volamena ary misy amin'ny loko 5: mainty, mavo, manga, maitso ary burgundy. (Kitapo feno sy marika sy certificates)
Standard Portfolio na LLC Kit - $ 99
Ny fikojakojana ny valopy dia hitazona ny taratasinao rehetra eo amin'ny toerany. Ireo kitapo ireo dia vita amin'ny vinyl tsara tarehy vita amin'ny totozy avo roa tonta. Ny avo lenta miendrika rindrina telo miloko miaraka amin'ny fanokafana varavarana roa ary ny fanakatonana fanentanana dia mamela pejy handaitra ary hitodika mora foana. Ny vatom-bokatra tsara rehetra dia aseho amin'ny volamena ary misy amin'ny loko 5: mainty, mavo, manga, maitso ary burgundy. (Kitapo feno sy marika sy certificates)
Ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba rongony dia vita amin'ny lamba rongony tsara, izay mampiavaka azy ireo sy mampiavaka azy. Ny vatosoa tsirairay dia vita amin'ny fitaovana mavesatra kokoa noho ny faharetana maharitra sy ny fiainana lava. Ny vatom-bokatra rehetra dia aseho amin'ny volamena ary misy amin'ny loko 3: mainty, mainty sy mainty ary mainty sy mainty. Custom Linen Corporate Kit (Kitapo feno sy famehezana)
Docu-Box Corporate na LLC Kit - $ 119
Ny famolavolana ny tsipika miavaka amin'ny sehatra ara-barotra, ny lanjany lehibe, dia manome fiarovana tsy misy ilàna azy. Ny Docu-Box tsirairay dia hita amin'ny loko 2: mainty sy burgundy. (Kitapo feno sy tombo-kase)
Zippered Portfolio Corporate na LLC Kit - $ 130
Ireo kitapom-batana matavy ireo dia safidy mahafinaritra ho an'ireo izay mikaroka endrika karazana portfolio. Ny sisin'ny sisiny, ny fikolokoloana zipa sy ny kofehy metaly dia mahatonga azy ireo ho safidy tsara. Ny anaran'ny fikambanana dia voasokitra amin'ny takelaka varahina vita amin'ny varahina. (Kitapo feno sy famehezana & Certificates)
Asehoy ny fahaizanao amin'ny mpampiasa vola, ny banky, ny CPA ary ny mpisolovava. Nantsoina hoe hôpitaly vita amin'ny hoditra mena ny Rosiana mena, izay ampiasaina hanamboarana azy io, ity boky firaketana an-tsoratra mavesa-danja mavesa-danja ity, izay tsara indrindra ho an'ny orinasa mpanatanteraka. Rehefa mandidy ianao dia hamaritra ny anaran'ny orinasa tianao amin'ny taratasy fanamarinana, tombo-kase ary tànana voapetaka amin'ny volamena 24K ao amin'ny hazavana. Ampahafantaro koa ny fanjakana sy ny taona nananganana ny orinasa. Ity kitapo ity dia misy pejy feno 20, mari-pankasitrahana nomerao miaraka amin'ny takelaka feno pejy vita printy miaraka amin'ny anaran'ny orinasa, fanjakana, lohatenim-pomba an-tsoratra ary sangisangy. Azonao atao ny manamarina mari-pamantarana fanampiny raha ilaina. Ho an'ny orinasa na orinasa. Tonga miaraka amin'ny minitra vitsy orinasan'ny orinasam-baovao printy. (Kitapo feno sy famehezana & Certificates)